जोलीको बोलीले बेलायतवासीको कुँडियो मन
डण्ड गुरुङ -
कोही भूतपूर्व गोर्खा होलान्, कोही बहालवाला त कोही व्यापार व्यवसाय र अध्ययनकै सिलसिलामा बसेकै किन नहोस् । बेलायतमा सबै नेपालीहरु एकअर्काप्रति श्रद्धाभावका साथ बसेका छन् । सम्मान र इज्जतका साथ रहेका छन् । आन्तरिक रुपमा नेपालीपनका साथ रहेका छन् । नेपालीहरुबीचमा आइपरेका समस्या नेपालीहरु नै मिलाउँछन्, नेपालीहरुबीचका आकांक्षा नेपालीहरुबीचमै राख्छन् । तर कहिलेकाहीँ नेपाली समुदायमाथि भाँजो हाल्ने तत्वहरु उद्दत भइदिन्छन् । त्यसतर्फ पनि बेलायतवासी नेपालीहरु पक्कै पनि सचेत नै छन् । हुनैपर्छ ।
नेपालप्रति धेरै चासो राख्छन् । नेपालका सुख दुःखमा साथ दिन्छन् बेलायतवासी । त्यति मात्र होइन, नेपालको पीडामा रुन्छन्, नेपालको उपलब्धिमा खुसी हुन्छन् । यसले पनि आफूहरु जन्मिएको देश, आफ्नो बाउबाजेको देशप्रतिको माया कति गाढा छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छन् नेपालीहरु ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन होस् वा सामाजिक परिवर्तन । सबै खालका परिवर्तनमा आडभरोसा दिन्छन् । साथ दिन्छन् । नेपालको राजनीतिप्रति कतिपय व्यक्तित्वहरुको व्यापक चासो र चिन्ता पनि छ । नेपाललाई होच्याएको, नेपाललाई हेपेको र गाली गरेको सुन्नसम्म पनि सक्दैनन् । नेपालको आन्तरिक मामिलाप्रति कसैले हस्तक्षेपकारी मन्तव्य दिएको सहन्न बेलायत बस्ने नेपाली ।
बोक्न त रातो बेलायती पासपोर्ट नै बोकेका छन् । तर पनि बेलायतवासी नेपालीहरु आफूहरु सक्कली नेपालीको परिचय दिन्छन् । त्यो परिचय मुखले होइन, व्यवहारले । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय गत साता बेलायतमा भएको एउटा कार्यक्रमको हो । बेलायतको अल्डरसटमा सुमार्गी परिवारको निम्तोमा भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली पनि थिए । उनको अभिव्यक्तिले कतिपय नेपालीको मन दुखायो, आक्रोसित बनायो । जुन कुरा छरप्रष्ट रुपमा कार्यक्रम हलमै देखियो ।
नेपालमा नवधनाढ्य घरानाका रुपमा परिचय बनाएका, विभिन्न राजनीतिक दल र शक्ति केन्द्रको आड भरोसा पाएका व्यक्तित्वका रुपमा परिचय बनाएका सुमार्गी परिवारले गरेको कार्यक्रममा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु खचाखच थिए । अल्डरसट क्षेत्रका भूपू गोर्खाका परिवारको पनि उत्तिकै उपस्थिति थियो । कार्यक्रमलाई भव्यता दिँदै थियो । भव्यताका बीचमा भारतीय जनता पार्टीका नेता जोलीले बोल्ने पालो आयो । उनले नेपालीहरुलाई खुशी पारे । भने– जय नेपाल । परर् ताली बज्यो । फेरि भने– नेपालको जय होस् । अर्को परर् ताली बज्यो । यसरी कार्यक्रम अघि बढ्दै थियो । जोलीले ताली पनि पाइरहेकै थियो । उनी थप नेपालका मामलाका विषयमा बोल्दै थियो । उनले भने– नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ ।
यसो भनिसकेपछि कार्यक्रममा सहभागीहरु खासखुस गर्न थाले । नेपालको मामलामा किन जोलीले यस्तो बोले ? प्रश्न गर्न थाले । नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने किसिमले जोलीले बोलेपछि त्यहाँ सहभागी बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले विरोध जनाए । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले त झन मन थाम्न सक्ने कुरै भएन । विरोध जनाए । विरोध जनाउनेहरुमाथि राम्रो व्यवहार भएन् । यसले कार्यक्रमको सन्देश अर्कै दिशातिर मोडियो । जुन प्रभाव देखाउनका लागि कार्यक्रम गरिएको थियो । जोलीको बोलीले स्वाहा बनाइदियो । कार्यक्रमको भव्यताको मर्ममै प्रहार भयो ।
नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । नेपालमा सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्छन् । सबैप्रति उत्तिकै सम्मान गर्छन् भन्ने कुराको सामान्य ख्याल समेत नगरी बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमार्फत् जबर्जस्ती हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानको अभिव्यक्ति जोलीले दिए, नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली भावनाको सम्मान गर्ने कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि पाच्य कुरा हुँदै होइन । नेपालको मामलामा विदेशी भूमिमा जम्मा भएका नेपालीहरुलाई उत्तेजित पार्ने मनसायबाट आएको अभिव्यक्तिले पक्कै पनि नेपालीको मनमा ठेस लागेकै छ । कार्यक्रममा भएको कमजोरीप्रति आयोजकले जति धेरै माफी मागे पनि कुमार्गको लक्ष्यका साथ कार्यक्रम गरिएको प्रष्ट भएको विश्लेषकहरुकै ठम्याइ छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम धावा बोल्दा पनि दुई बहालवाला सांसदहरु भने ट्वाँ परेर बसेका थिए । श्रीमतीहरुसाथ सुमार्गी आयोजित कार्यक्रममा पुगेका एमाले सांसद कर्णबहादुर थापा र रामनारायण विडारी मञ्चमा जोलीसँग कुम मिलाएर बसे । उनको अभिव्यक्तिप्रति मौन समर्थन गरे जस्तै गरी बसे, जनताको भावनाको सम्बोधन र सम्मान गरेनन् । यसले हाम्रा नेता र सांसदहरुको जनताको पक्षमा छ कि छैन ? भन्ने प्रष्ट गरेको छ ।
जोलीको बोलीले सबैभन्दा पहिला ती सांसद महोदयहरुलाई आपत्ति हुनुपर्ने थियो । किनकि नेपाल धर्म निरपेक्ष देश हो भनेर लेखिएको संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका उनीहरु दुई थिए । त्यसैले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा एउटा भारतीय व्यापारी नेताले बोल्दा चुपचाप रहनु र सहनुको अर्थ जनताले कसरी बुझ्ने ? कसरी ठम्याउने ? जनताको आक्रोस आउनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।
हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रा लागि जोली होइन्, कार्यक्रममा विरोध गर्नेहरु नै बढी चाहिन्छ । नेपाली हुनुको नाताले भारतीय होइन, नेपाली नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि त्यो वास्तविकतालाई बिर्सने प्रयास कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । हामी नेपाली–नेपाली बीच, एउटै खोलाखर्कका समुदायबीच एकअर्कामा मुड्की बजार्ने काम कतै कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । हाम्रा लागि भारतीय होइन, कुनै मार्गी होइन, हामीलाई बेलायतमै रहने हाम्रो समुदायका मानिस चाहिन्छ । नेपाली समुदाय चाहिन्छ । यो कुरामा सबैले हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हामीले मान, इज्जत र सम्मानको तिलाञ्जली दिएको ठहरिने छ । जसले हामीलाई आफ्नो स्वाभिमानका लागि होइन, आफ्नो इमान्दारितामा होइन, अरुका लागि बाँचेको ठहरिने छ । यो जीवनका लागि मरेतुल्य हुनेछ ।
नेपालका नेताहरु भए होलान, आफ्ना पदको लोभका लागि भए होलान । तर नेपाली कहिल्यै भारतीय पक्षमा उभिएनन् । उनले नेपालीप्रति गर्ने घृणित हर्कतहरु देखेकै छन् । भारतीय सत्ताधारीहरुले नेपाललाई प्रयोग गर्न गरेको कदम नदेखेका होइनन् । त्यसैले पनि स्वाभिमानी नेपाली भारतीय रतन्धो सत्ताधारीहरुको पक्षमा कहिल्यै उभिन सक्दैनन् । यो सत्य हो । अर्को सत्य, बरु भोकभोकै मर्न तयार छन्, स्वाभिमानी नेपालीले भारतीय विस्तारवादीहरुको नेपालप्रतिको अभिव्यक्तिको खुलेर, डटेर सामना गर्नेछ, मुकाविला गर्नेछ । यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।